Coronavirus 2019 (COVID-19) na - emetụta ahịa ụwa niile. Na mgbakwunye na ọnụ ahịa nke ndụ mmadụ, mmetụta nke mgbasa nke nje a na akụnụba ụwa ka amalitere amata ma nwee mmetụta dị ukwuu na ntanetị nke ụwa. N'okwu a, mkpa ụwa maka ọgwụ aka ọgwụ arịala elu. N'ime oge dị oke egwu nke mgbochi ọrịa na njikwa, nkpuchi na mkpuchi ịwa ahụ roba bụ otu n'ime akụrụngwa nchekwa dị ụkọ maka ndị ọrụ ahụike n'ihu.
A na-eji patị latex eme ihe site na latex glova dịka isi akụrụngwa. A na-ehichapụ gloves latex site na acid na alkali na mbụ wee sachaa ya. A na-ebu ụzọ tinye ihe nlereanya ahụ ehichapụrụ na mmiri ọkụ ma kpoo ya ruo mgbe a ga-etinye ihe na-eme ka ahụ gelling wee kpoo. Mgbe ịmachara mmiri, ziga na oven maka ihicha mbido, gbanye mmiri ọkụ wee ziga ya na oven maka ịgwọ ọrịa, ihicha ma mebe. Mgbe emechara ya, a na-agbazi ma ọ bụ na-eme ka mmiri gụchaa mmiri maka nyocha, saa ya, dehydrated ma kpoo ya, wee kwakọba ma ziga ya n'ụlọ nkwakọba ihe ngwaahịa ahụ.
Thekwanyere ogwe aka na-emepụta PVC na-agbaso usoro mmepụta na-aga n'ihu na usoro imikpu kpọmkwem, yana nhazi ihe nkiri na-acha ọkụ. Modelsdị na nkọwa dị iche iche nwere ike ịmepụta n'ịntanetị n'otu oge. Ogologo usoro mmepụta bụ mita 60, 80 mita na 100 mita, wdg, na nnukwu akpaaka na nnukwu mmepụta. Enwere ike idozi ya na iwepu akpaka, yana ogologo nke mmepụta ahịrị nwere ike ịhazi ma wụnye dịka saịtị mmepụta ndị ahịa.
Ngwongwo nitrile compound nwere uru nke ogwe aka nitrile na PVC gloves. A na-emikpu ha n'ime ihe ndị agwakọtara. Ihe mkpuchi dị n'ime ime ahụ dị larịị ma dịkwa mfe iyi. Uwe aka nwere nkedo kariri ogwe aka PVC ma odi ala. Mpụga elu nke glove nwere ọnụọgụ nke esemokwu, dị mfe iji, wee rute ọkọlọtọ nke ezigbo mpụta na nke dị n'ime.
Na mmepụta nke uwe aka, a na-ebu ụzọ tinye isi ihe na ihe inyeaka na igbe pụrụ iche ma gwakọta ya n'otu akụkụ iji mepụta emulsion. Mgbe nzacha, nhicha, na iguzo, a na-eziga ngwakọta na tankị tankị na akara mmepụta na mgbapụta. .Under nkịtị mmepụta ọnọdụ, n'aka Ebu na nzukọ akara na-akpaghị aka na-abanye na-azọnye tank site yinye, na aka Ebu na-agbaso na emulsion-abịa nke na-azọnye tank na n'aka, na nọgidere na-agbagharị mgbe na-eme njem iji mee emulsion on elu nke aka ebu edo na-eme ka ngafe Ude mmiri na-agbadata. Mmiri mmiri na-agbapụta na-alaghachi na tankị mmiri ahụ site na tank nchịkọta. Mgbe ị na-atanyebiga emulsion ahụ, ebu aka na-abanye n'ime oven na usoro mmepụta. N'okpuru ọnọdụ a, emulsion na aka aka na-agbake ma kpụrụ. Ihe aka na-esite na oven na-agabiga usoro dị ka obi jụrụ oyi, mmebi iwu, na ịgụta ọnụ.